SMMS: Usoro Social Media Management | Martech Zone
SMMS: Usoro Social Media Management
Uzo ozo nke teknụzụ n'ime oghere mgbasa ozi mmekọrịta bụ ebe a na ngwa dịka ObjectiveMarketer - a na-akpọ ya Sistemụ Njikwa Mgbasa Ọha. Usoro mgbasa ozi Social Media na-enye gị ohere:
jikọọ - Jikọọ niile gị mmadụ mgbasa ozi ọwa dị ka Facebook, Twitter, LinkedIn na Youtube n'ime otu usoro.
jikwaa - Wulite ulo oru ndi mmadu nke n’eme ka ahia gi di ugbu a. Hazie ozi niile edepụtara na ọwa ọ bụla. Modekwado ntanetị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ohere ị ga-ekenye ndị ọrụ ndị ọzọ ọrụ.
Tụọ - Nchịkọta ma jikwaa data mmekọrịta. Usoro a ga - enyere onye ọrụ aka ịhụ akụkọ banyere ozi niile site na echiche iji kwuo, mbak. Okwesiri inye ụdị nyocha.
Mgbasa Ozi - mepụta ma hazie usoro mkpọsa - gụnyere nkwalite na mmụba n'etiti ndị na-elekọta mmadụ.
Nke a bụ nnukwu ngosi sitere na James Nwachukwu, Social Media Marketing Manager maka Nlele email: